Tongasoa eto hitsidika anay hahafantatra bebe kokoa momba ny orinasa. OEM / ODM misy: Ny sary famantaranao amin'ny vokatra. Vokatra namboarina mifanaraka amin'ny sary. Izay hevitrao momba ny vokatra dia afaka manampy anao mamolavola sy manome sary. Ny endri-javatra amin'ny takelaka fandriana vy any an-tany atsinanana ● Ny fitaovana dia hery vy avo lenta sy avo lenta ary vy akaiky vita amin'ny volon'ondry azo alaina ao amin'ny Kilasy GG-20, GG-25 na GG-30 no voafidy hanamboatra ny t-slotted cast takelaka vy. Fitaovana hafa toy ny vy vy nodular na c ...
OEM / ODM misy: Ny sary famantaranao amin'ny vokatra. Vokatra namboarina mifanaraka amin'ny sary. Izay hevitrao momba ny vokatra dia afaka manampy anao mamolavola sy manome sary. mpitondra vy Triangular mpitondra jereo ny fahamendrehana eo amin'ny fitaovan'ny milina sy ny masinina (ary ny fitaovana) avo lenta. sary bobongolo No. habe (mm) BCC0028 300 * 210 BCC0029 300 * 400 BCC0030 300 * 500 BCC0031 400 * 600 BCC0032 500 * 800 BCC0033 1000 * 750 cast iron Angle plate w ...